Eziokwu n'azụ glaciation na afọ ice | Netwọk Mgbasa Ozi
N’ime ọtụtụ nde afọ gafere kemgbe e guzobere ụwa, enweela oge ice. A na-akpọ ha dị ka akpụrụ Age. Ndị a bụ oge ebe mgbanwe ihu igwe na-eme nke na-agbadata ọnọdụ okpomọkụ ụwa. Ha na-eme ya n’ụzọ nke mere ka elu ụwa jụọ oyi. Ọ dị mkpa ịmara na mgbe ị na-ekwu maka mgbanwe ihu igwe ị ga-enwerịrị ntụnye iji tinye onwe gị n'ọnọdụ ụwa anyị.
Wantchọrọ ịma usoro nke glaciation na afọ ice nke ụwa anyị? N'ebe a, anyị na-ekpughe ihe niile.
1 Njirimara oge ice
2 Mara afọ ice
3 Ikpeazụ ice afọ
4 Ihe na-akpata glaciation
Njirimara oge ice
A kọwara afọ ice dị ka oge nke ejiri ọnụnọ akpụrụ akpụ dị ukwuu na-adịgide adịgide. Akpụrụ a na-agbatị ruo ma ọ dịkarịa ala otu n’ime mkpara ndị ahụ. A maara ụwa ka gafere 90% nke oge gị n'oge nde afọ gara aga na 1% nke okpomọkụ kachasị oyi. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a dịkarịrị ala kemgbe afọ 500 gara aga. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ụwa tọrọ atọ n’ime ezigbo ọnọdụ oyi. A maara oge a dị ka Quaternary Ice Age.
Afọ anọ ikpeazụ ice emeela Oge 150 nde. Ya mere, ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na ha bụ n'ihi mgbanwe nke orbit nke ụwa ma ọ bụ mgbanwe nke ọrụ anyanwụ. Ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ na-ahọrọ nkọwa nke ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ọdịdị nke oge ice na-ezo aka na nkesa nke kọntinent ma ọ bụ ntinye nke ikuku gas.
Dabere na nkọwa nke glaciation, ọ bụ oge e ji adị adị nke akpụrụ akpụ na okporo osisi. Site na usoro isi aka, ugbu a anyị abanyela n'ime oge ice, ebe ọ bụ na okpu pola nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% nke elu ụwa dum.
Glaciation na-ghọtara dị ka oge nke ice afọ nke okpomọkụ bụ nnọọ ala ụwa. Akụkụ ice ahụ, n'ihi nke a, na-agbatị n'akụkụ ala ala ma na-achị kọntinenti. Achọpụtala ihe mkpuchi ice na latitude nke equator. Oge ikpeazu ikpeazụ mere ihe dịka puku afọ iri na otu gara aga.
Mara afọ ice
E nwere ngalaba sayensị nke na-ahụ maka ịmụ glasia. Ọ bụ ihe gbasara glaciology. Ọ bụ onye na-ahụ maka ịmụ ihe ngosipụta nile sitere na mmiri siri ike. Na mmiri dị na steeti siri ike ha na-ezo aka glaciers, snow, akụ mmiri igwe, mmiri mmiri, ice na usoro ndị ọzọ.
E kewara oge glas ọ bụla n'ime oge abụọ: glacial na interglacial. Ndị nke mbụ bụ ndị ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị oke oke na ntu oyi na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe nile na mbara ala. N'aka nke ọzọ, ndị na-emegiderịta onwe ha na-adịkarị nwayọọ, dị ka ọ dị taa.
Ruo ugbu a, oge ise nke afọ ice amatala ma kwenye: Quaternary, Karoo, Andean-Saharan, Cryogenic na Huronian. Ihe ndị a niile emeela kemgbe oge ụwa.
Ejiri afọ Ice nwere ọ bụghị naanị site na mberede na ọnọdụ okpomọkụ, kamakwa site na ịrị elu ngwa ngwa.
Oge Quaternary bidoro otutu nde 2,58 gara aga wee rue rue ugbu a. Karoo, nke a makwaara dị ka oge Permo-Carboniferous, bụ otu n'ime ogologo oge, na-adịgide ihe dị ka 100 nde afọ, n'etiti 360 na 260 nde afọ gara aga.
N'aka nke ọzọ, oge glasi nke Andean-Saharan dịgidere naanị afọ 30 ma mee n'etiti 450 na 430 afọ gara aga. Oge kachasị njọ nke megoro na ụwa anyị bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ cryogenic. Nke a bụ oge ice kachasị njọ na akụkọ akụrụngwa ụwa niile. N'oge a, a na-eme atụmatụ na mpempe ice nke kpuchiri kọntinent rutere na mpaghara ụwa.
Igwe glashiation nke Huroni bidoro ijeri afọ 2400 gara aga wee kwụsị ihe dịka afọ 2100 gara aga.
Ikpeazụ ice afọ
Anyị nọ ugbu a na oge mmekọrịta n'etiti Quaternary glaciation. Mpaghara nke okpu pola bi na 10% nke elu uwa dum. Ihe akaebe na-agwa anyị na n'ime oge ezumike a, enweela ọtụtụ oge ice.
Mgbe ndị mmadụ na-ezo aka na "The Ice Age" ọ na-ezo aka n'oge ice ikpeazụ nke oge Quaternary a. Thelọ ebe obibi ahụ malitere Afọ 21000 gara aga wee kwụsị ihe dịka afọ 11500 gara aga. O mere n'otu oge na mpaghara abụọ ahụ. Enwere ike nke kachasị ukwuu na ice na ugwu ụwa. Na Europe, ice ahụ gara n'ihu, na-ekpuchi Great Britain, Germany na Poland. All North America e liri n'okpuru ice.
Mgbe oyi kpuchiri, oke osimiri ahụ gbadara mita 120. Nnukwu mbara dị n'oké osimiri taa dị na ala n'oge ahụ. Ihe omuma a bara ezigbo uru mgbe omumu omumu nke otutu umu anumanu na osisi. N'oge ha na-agagharị n'elu ala n'oge afọ ice, ha nwere ike ịgbanwe mkpụrụ ndụ ihe nketa wee kwaga mpaghara ndị ọzọ.
N'ihi mmiri dị ala, o kwere omume iji ụkwụ si Siberia gaa Alaska. Oke igwe mmadu ha ruru ọkpụrụkpụ nke 3.500 ruo mita 4.000, na-ekpuchi ụzọ n'ụzọ atọ nke ala ndị ahụ pụta.
Taa, a gbakọọ na ọ bụrụ na glaciers ndị fọdụrụ agbaze, oke osimiri ga-ebili n'agbata mita 60 na 70.
Ihe na-akpata glaciation
Ọganihu na nloghachi nke ice metụtara njikọ nke jụrụ oyi nke ụwa. Nke a bụ n'ihi mgbanwe na ihe mejupụtara ikuku na mgbanwe na orbit nke ụwa gburugburu Anyanwụ.Ọ nwekwara ike ịbụ ngbanwe nke na-agba anyanwụ gburugburu n’ime ụyọkọ kpakpando anyị, Milky Way.
Ndị na-eche na glaciations na-kpatara ihe dị n'ime nke ụwa, kwenyere na ha sitere na mgbanwe nke efere tectonic na mmetụta ha na ọnọdụ metụtara ya na oke oke oke osimiri na nke ụwa n'elu ụwa. Fọdụ kwenyere na ha bụ n'ihi mgbanwe nke ọrụ anyanwụ ma ọ bụ ihe omimi nke mbugharị Earthwa-Ọnwa.
N’ikpeazụ, enwere echiche na-ejikọ mmetụta nke meteorites ma ọ bụ nnukwu mgbawa ugwu na glaciation.
Ihe ndị na-akpata na-akpata esemokwu mgbe niile na ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na anyị adịla nso ịkwụsị oge a na-agbanye mmekọrịta. I chere na a ga-enwe ọhụụ ọhụụ n'oge na-adịghị anya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Na glaciation na akpụrụ afọ
Ekelere m gị maka mbọ gị na ebumnuche gị gbasara ozi. Abụ m Dr na sayensị nchịkwa na enwere m amụma amụma iji tụọ nkwado na usoro ọrụ ugbo. Enwere m mmasị na ihe ọmụma gị na esemokwu glacial. M na-ahapụrụ m ozi m na obi ụtọ. Daalụ.
Zaghachi Alejandro Olivares Ch